Akụkọ - Gbalịanụ ike wuo ihe mgbochi maka ahụike ọha na obodo
Pịa na ekwentị mkpanaaka ka oge atọrọ maka oge nucleic acid ule oge, ịkwụ ụgwọ ịntanetị, nlele saịtị, nyocha ekwentị site na ekwentị eziokwu… N'etiti ọnwa Nọvemba, Shanghai "Health Cloud Nucleic Acid Testing Registration Version 2.0 Emeputara ka ijere onodu aku na uba aka n'uzo di nma, di oru oma, na nke a gha achota Ozo oso nke ndi mmadu emeela ka usoro mgbochi oria obodo mepere emepe.
Ọrịa okpueze ọhụrụ ahụ na-agbada na "agbụrụ" megide nje ahụ. Usoro ọrụ ọhụrụ dị iche iche a na-enwetụbeghị ụdị ya ga-eji nke nta nke nta mee ngwa ngwa na 2020. Baptism nke agha ahụ “ntiwapụ” emeela ka ndị mmadụ mata nke ọma na usoro ahụike ọha na eze bụ akụkụ dị mkpa iji hụ na ahụike nke mmadụ niile.
Afọ pụrụ iche, omume pụrụ iche! Nzukọ nke iri nke iri nke kọmitii nke iri na otu nke ime obodo nwere ụbọchị ole na ole gara aga kwusiri ike mkpa ọ dị ịrụ ọrụ siri ike na njedebe nke atụmatụ 13th afọ ise na mbido nke afọ iri na anọ nke afọ ise. N'ihe banyere ọnọdụ ntiwapụ nke oge a, anyị ga-enwe nchekwube dị elu, nzaghachi sayensị, mmeghachi omume dị nro, na mmejuputa iwu ziri ezi, na-aga n'ihu na-ewusi mgbochi ọrịa na njikwa na ikike mmeghachi omume mberede, ma rụọ ọrụ siri ike nke “Mpụga agbachitere ọsọ ọsọ na esịtidem agbachitere rebound”.
A na-ese ụkpụrụ ụlọ ọhụrụ, na njem ọhụrụ na-amalite. Medicallọ ọrụ ahụike na ahụike nke Shanghai na-akwado ozi ya, ma na-agbasi mbọ ike iji wuo amamihe nke ihe ọmụma, ụzọ ịzaghachi, na obi ike iji chọọ mgbanwe, iji wulite usoro nchebe siri ike maka ndị mmadụ na-ebi ndu, na ide oge ọhụụ "obodo, mee ka ndụ ka mma Isi ọhụrụ na" mara mma ".
Mee ka ihu-ihu na-aga n'ihu ma wuo usoro ahụike ọha na eze zuru oke
Na November 1, “Iwu nke obodo Shanghai na Ahụike Ọha Ahụike Ọha” malitere. Site na nlekota na ịdọ aka na ntị oge na nzaghachi mberede, ahụmịhe ọhụụ gara aga abanyela na isi 10 na isiokwu 85. Mepụta usoro nlekọta ahụike ahụike ọha na eze nke "mgbochi mbụ, udo na agha jikọtara ọnụ", Shanghai, obodo mepere emepe, na-ewulite usoro nchebe ọha na eze siri ike karị. Nke a bụkwa mba izizi ọrịa na-achịkwa ọrịa na mba izizi mba ya.
Mgbochi ọrịa na Dacheng chọrọ nzaghachi ngwa ngwa na eziokwu, yana nkwado nke ụlọ ọrụ. Laa azụ n'oge na Jenụwarị 20, 2020, Shanghai kọrọ akụkọ izizi izizi nke oyi baa ume; na Jenụwarị 24, na Ememe Afọ Ọhụrụ, Shanghai malitere usoro nzaghachi maka isi ihe mberede mberede ọha na eze. Mgbawa nke agha "ọrịa" dugara na mgbanwe na usoro miri emi. Na Eprel 7, Shanghai nwere ogbako iwu ọha na eze wee wepụta "Ọtụtụ Echiche na Imezi Mgbochi na Usoro Nlekọta nke Ọrịa Na-ahụ Maka Ọrịa na Imeziwanye Ọha Ahụike Ọha Ahụike Ọha" (nke a na-akpọ "Shanghai 20 Public Health Construction"). Nzukọ ahụ kwuru n'ụzọ doro anya: Site na 2025 Shanghai ga-abụ otu n'ime obodo kachasị sie ike na usoro ahụike ọha na eze zuru ụwa ọnụ.
"Anyị na-alụ ọgụ megide ọrịa ahụ, anyị na-amatakwa ma na-akwalite nhazigharị na mmelite nke usoro ahụike ọha na eze mepere emepe, ma na-agbasi mbọ ike ka anyị nwee ike ịchọta usoro nlekọta nchebe ọha na eze." Prọfesọ Luo Li, onye odeakwụkwọ Party nke Schoollọ Akwụkwọ nke Ahụike Ọha na Mahadum Fudan, gwara ndị nta akụkọ. "Ebumnuche" n'azụ owuwu nke usoro a kapịrị ọnụ maka ọchịchị nchekwa ahụike ọha na obodo mega-obodo dị: Nke mbụ, mmesi ike na mgbochi bụ iji nweta ịdọ aka na ntị oge na usoro ọrịa na-akpachapụ anya karịa na usoro ahụike ọha na eze. Nke abuo, ịchụso "ihe efu efu" adabaghị na eziokwu. Ya mere, mgbe okwu ndị dị iche iche pụtara, otu esi emenyụ "ire ọkụ" ahụ ọsọ ọsọ na obere ụgwọ ma jigide ọrụ nkịtị nke ndụ mmadụ na akụ na ụba bụ ihe usoro ahụ kwesịrị ịchụso.
Site n'usoro nke ugbu a, mgbochi mgbochi na ịchịkwa ya na mkpofu ngwa-ngwa anyị na egosiputa ọfụma ugbua egosila na ọ dị mma na nkwalite na mwube ahụike ọha na eze. Luo Li kwuru na n'ọgụ a na-alụ megide okpueze ọgbụgba nke pneumonia ọhụrụ, Shanghai nwere ụlọ ọrụ 117 na obodo niile. Clinlọọgwụ na-ahụ maka ahụ ọkụ na ụlọ ọgwụ 200 fever fever zigara ọrụ dị mkpa "nchekwa". Na-elepụ anya n'ọdịnihu, iwulite "mgbidi ọla na nke igwe" maka mgbochi na njikwa ọrịa na-efe efe nke obodo ahụ, site na nwelite nke usoro ahụike ọha na eze na iwu nke usoro ịdọ aka ná ntị na talent dị ka ọrịa, ọrịa iku ume, na ọgwụ nlekọta dị oke egwu. ga-abụ ọrụ dị ogologo oge, nke chọrọ nnọgidesi ike. Iji mezuo ya, ọ dị mkpa iji mee ka atụmatụ na atụmatụ na-aga n'ihu sie ike, ma ghọta atụmatụ nke ọrụ ahụ.
N'ụzọ ziri ezi izute ndị mmadụ mkpa na mee ngwangwa mgbanwe nke "Smart Digital Hospital"
Nnọkọ nnọkọ ahụ kwuru na anyị ga-akwalite mgbanwe mgbanwe dijitalụ nke obodo. Mgbanwe dijitalụ nke obodo bụ isiokwu ọhụrụ, usoro ihe ọkụkụ, na-ekpuchi akụkụ niile nke mmepụta obodo, ndụ, na ihe ọmụmụ, gụnyere ịhazi usoro akụ na ụba, ịbawanye ndụ, na ịchịkwa ọchịchị.
Celegbanwe mgbanwe dijitalụ na iwulite ụlọ ọgwụ "amamịghe" bụ ihe ndị mmadụ chọrọ ugbu a. Dika onu ogugu ohuru si kwuo, ulo ogwu 43 nke ntaneti na Shanghai amalitela oru nyocha na oru nlebara anya na Intanet, na "Internet + Nursing Services" ka na-aga n'ihu na mpaghara 4 tinyere Changning, Jing'an, Putuo, na Pudong.
Na Xuhui District Central Hospital, ebe ọ bụ na ọ ghọrọ ụlọ ọgwụ ọha na eze mbụ na Shanghai iji nweta ikikere ụlọ ọgwụ ịntanetị na February nke afọ a, nyocha ahụike n'ịntanetị, ndụmọdụ igwe ojii "igwe ojii", ịkwụ ụgwọ mkpuchi ịntanetị ahụike, na nnyefe ụlọ nke ọgwụ nwere ihe niile achọpụtala na ụlọ ọgwụ a. N’abalị iri abụọ na asaa nke ọnwa Nọvemba, “uhulọ Ọgwụ Xuhuiyun” enwetala ihe karịrị ndị dọkịta 35,000 wee nye akwụkwọ nde isii na narị ise na iri ise na asaa. "Ingga dọkịta n'ụlọ na-ahapụghị ụlọ" aghọwo ihe a na-eme kwa ụbọchị maka ọtụtụ mmadụ.
“N'ihi nkwado nke usoro atumatu, Xlọ Ọgwụ Xuhuiyun enwetawo mmepe doro anya. Ka ọ dị ugbu a, nkezi ọnụ ọgụgụ nke ịntanetị n'ịntanetị kwa ụbọchị bụ 400-500, na ogo nke ndụmọdụ emewokwa ka ọ dị elu: ndụmọdụ nlekọta ahụike dị obere bụ obere, na ịchọrọ maka ọrụ nlekọta ahụike bụ isi. Na nkenke, ihe anyị na-eme bụ 'mkpa dị nnọọ mkpa' nke ndị nkịtị ma dozie ọtụtụ nsogbu dị mkpa. ” kwuru, sị Zhu Fu, onye isi oche nke Xuhui District Central Hospital.
Mmepe na ntinye nke data ahụike etinyelarị na ndụ ụmụ amaala Shanghai. Mgbe ntiwapụ ahụ gasịrị, "koodu nwere ngwa ahụ" ghọrọ "nhazi ọkọlọtọ" maka ụmụ amaala Shanghai ịga njem, nke ọ bụghị naanị mere ka ọ dịrị ụmụ amaala mma, kamakwa belata nrụgide na igbochi na ịchịkwa ọrịa na-efe efe. Dị ka ihe mmalite dị mkpa maka “otu netụzọ imeghe” yana “otu netwọkụ jikọtara ọnụ”, ngwa a ebuputara ngwa ngwa akwụsịghị na “usoro bara uru”, mana ọ gara n'ihu ịgbasa ndapụta ngwa ya, na-agbanwe koodu ọrụ ọrụ nke obere amaala ubi nke njikwa na ọhaneze.
N'ụlọọgwụ ọpụpụ nke Hospitallọ Ọwụwa Ọwụwa Anyanwụ nke Hospitallọ Ọgwụ Renji, Nwaanyị Li kwụ n'ahịrị na windo ndebanye aha wee chọpụta na ọ na-apụ na ụtụtụ ma na ọ wetaghị kaadị mkpuchi mkpuchi ahụike ya. N’ụzọ tụrụ ya n’anya, ụlọ ọgwụ ahụ amalitela ọrụ ọhụrụ iji kwado “azụmahịa tụfuo” nke kaadị mkpuchi ahụ ike, ya bụ, jiri ekwentị mkpanaaka tinye akwụkwọ maka akwụkwọ elektrọnik nke mkpuchi ahụike na ntanetị. Mgbe ngwa ahụ gara nke ọma, nyochaa QR na windo na naanị QR code wee gee “di” Site na otu uda, ndebanye aha ndokwa mkpuchi ahụike agwụla.
N'ihi "Otu Net Net" na-ebupụta "Otu Ihe maka Paykwụ Medicalgwọ Ahụike", ejikọtara "Usoro ntinye" na "Medical Insurance Electronic Voucher", ma ugbu a ụmụ amaala Shanghai nwere ike iji "Apply Code" tinye maka ndebanye aha n'ụlọ ọgwụ ọha. n’obodo dum. Ọgwụ ahụike, ịkwụ ụgwọ na usoro ndị ọzọ.
Nzaghachi na "ndị na-abụghị kọntaktị" chọrọ pụrụ iche nke ọrịa na-efe efe, ọ ga-akpali mgbanwe nke ụlọ ọgwụ anụ ahụ n'ime "ụlọ ọgwụ dijitalụ dijitalụ". Zhu Fu gwara ndị nta akụkọ na usoro ikpo okwu Xuhuiyun ka na-arụ ọrụ. N'ọdịnihu, ndị ọrụ ahụike ịntanetị ga-aga n'ihu na-egbo mkpa ahụike nke ndị mmadụ n'ụzọ ziri ezi, ma nyochaa mgbanwe miri emi yana ndị ọchịchị na usoro ntanetị.
Igha ihu na Osimiri Yangtze ma chee mba ahụ dum ihu, na-aga n'ihu na-eme ka ọrụ nlekọta ahụ ike dịkwuo mma
Na ngwụcha afọ, enwere ozi ọma na-eme ndị mmadụ obi ụtọ: Shanghai agwụla ọrụ kwa afọ tupu oge agafee na ngwụcha Ọktọba na gọọmentị gọọmentị gọọmentị obodo 26 na mpaghara 10 n'afọ a.
Na-ewere usoro gara aga iji hazie atụmatụ ahụ, gaa n'ihu na-agbasi mbọ ike na njikwa usoro, nke mere na ndị mmadụ nwere ezigbo mmetụta nke uru. The 26 ọchịchị ọchịchị oru ngo na-agụnye: agbakwunye 7,000 akwa maka ndị agadi, na-ewu 50 ọhụrụ obodo juputara dị ka ochie ọrụ emmepe; 200 obodo nri ndị agadi, rụzigharịrị àkwà 2,000 maka nọọsụ na-elekọta nke nkwarụ cognitive; emeputara ohuru 11 ihe mberede ahuike (120); gbakwunyere 100 smart ike ụgbọ, wdg. Behind a set nọmba bụ ndị mmadụ na-agụsi agụụ ike na-atụ anya ka elu mma nke ndụ.
Dabere na Qingpu, na-eje ozi na Osimiri Yangtze Delta, ma chee ihu na mba ahụ dum, na Ọktọba 24, Hospitallọ Ọgwụ Intanet nke Yangtze River Delta (Shanghai). Ọ na-adabere na nkwado azụmahịa nke holọ Ọgwụ Zhongshan nke jikọrọ aka na Mahadum Fudan ma dabere na iwu nke Hospitallọ Ọgwụ Zhujiajiao na Mpaghara Qingpu iji jikọta akụ na ụba ahụike dị elu na mpaghara Yangtze River Delta. , Iji mee ka ọrụ ahụike dịkwuo mma nke Yangtze River Delta Eco-Green Integrated Development Demonstration Zone, ma nọgide na-eme ka mmepe nke nkà mmụta ọgwụ dị mma, usoro nlekọta ahụike, mkpuchi azụmahịa, na njem nleta ahụike na Mpaghara Yangtze Delta.
Yangtze River Delta (Shanghai) Hospitallọ Ọgwụ firstntanetị emechaala akụkụ mbụ nke owuwu, ma enwere atụmatụ maka akụkụ nke abụọ nke iwu. Wu Jinglei, onye isi nke Shanghai Municipal Health Commission, mgbe ọ na-ekwu maka ọhụụ ogologo oge nke Yangtze River Delta Internet Hospital, kpọtụrụ aha kpọmkwem na ọ nwere olile anya na ụlọ ọgwụ a, nke a mụrụ na ihe ndị dị na Internetntanetị, ga-elekwasị anya na ahụmịhe onye ọrịa, tinye dị mkpa na njikọta, ma na-arụsi ọrụ ike na mpaghara nnwale a nke teknụzụ sayensị ọhụụ. "Nọgidenụ na-ege ntị na ahụmịhe ahụike nke ndị nkịtị, ma na-emeziwanye usoro ọrụ oge niile, ka ị bụrụ akara ngosipụta ahụike mara mma na Yangtze River Delta, mba ahụ niile na ọbụna Asia, na-eduga mmepe n'ọdịnihu."
Uche na ọnọdụ zuru ezu, jeere ozi zuru oke, ma mepee egwuregwu ọhụrụ, enwere ike ịtụ anya ọdịnihu. N’ọnwa a, dịka otu n’ime ọrụ dị mkpa nke “Ahụike Shanghai Action (2019-2030)”, emechala atụmatụ atụmatụ ihe mgborogwu nke mbụ nke mba ahụ, nke ga-enyochapụta mmetụta nke atụmatụ akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. , na oru injinia na ahụike ọha. mmetụta. “Ejikọtara ahụike n'ime atụmatụ niile”, Shanghai gara n'ihu na-eme ihe ma na-arụkọ ọrụ ọnụ iji kpuchido ahụike ndị mmadụ nke ọma.
Post oge: Dec-04-2020